कथा : भ्रमको बाटो::PraharNews.com
कथा : भ्रमको बाटो
अहिले नै प्रेमिल अङगालोमा बाधेर प्रेमले चुम्दै भनौ
मीरा प्रसाईं –
एकदिन फेसबुक चलाइरहेका बेला एउटा आकर्षक पुरुषको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो । हतपत अक्सेप्ट गर्ने बानी थिएन मेरो । तर ! त्यो रिक्वेस्टलाइ भने अक्सेप्ट गरिदिए । उताबाट स्माएलको इमोटिकेसन आयो अनि तुरुन्तै “अ म्यासिभ थ्याङ्क्यु हजुर , म सरल शर्मा अमेरिकाबाट । मैले लेखे – वेल्कम । फेरि स्माएलको इमोटिकेसन आयो , बदलामा मैले केही लेखिन । मेरो स्वभाव हतपत्त कसैसङग नजिक हुने खाल्को थिएन । भोलि पल्ट फेरि उहीँ सरल शर्मा स्माएलको इमोटिकेसनका साथ देखा पर्यो । हाय /हेल्लो गर्दै दुइचार दिन बिते । सबै पोस्ट र फोटोमा लाइक कमेन्ट भटाभट आउन थाले उसका । किन लाइक कमेन्ट गरेर चासो देखाएको होला एकमन रिस पनि उठ्थ्यो । केही दिनको सामान्य कुराकानी पश्चात् उ मेरो सौन्दर्यमा कायल भएको कुरा गर्न थाल्यो ।
“हुन पनि म असाध्यै सुन्दर थिए । “सबैले त्यसै भन्थे । प्राकृतिक रुपमै सुन्दर थिए म । सरल पनि त्यसै भन्थ्यो ” हजुरलाइ त सुन्दर देखिन मेकअप नै गर्नु नपर्ने रहेछ । ” काला आँखा , सुरिलो नाक , पिपल पाते ओठ , चेरी फल झै राता गाला, गाइको घ्यु झै सेतोपहेलो छालाको रङग, बान्की परेको न होचो न अग्लो कद । एना हेर्दा आफ्नो गुलाफ जस्तो फक्रीएको रुप देखेर भुतुक्कै हुन्थे म आफै पनि । कुनै पनि पुरुषले गरेको तारिफले मलाइ उनिहरु तिर झुकाब बढाएको थिएन । कसैले दुई शब्द मीठो बोल्यो र आफ्नो तारिफका लागि केही शब्द खर्चियो भन्दैमा म फुरुङग हुने खाल्की केटि थिइन तर पनि सरलसङग कुरा गर्दा रमाइलो लाग्न थाल्यो मलाइ । खोइ, उसको शैली नै मायावी थियो कि , त्यसै त्यसै म उसको शैलीमा कायल हुन थाले । कसैसङगको पहिलो भेटनै “फस्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन ” भने झै हुदो रहेछ । सरल प्रतिको आकर्षण चर्मोत्कर्समा पुग्न थालेको थियो। दिनहु जसो हाम्रो कुरा हुन्थ्यो ,एकदिन उसलाइ सोधे – सुरुमा र अन्त्यमा स्माएलको इमोटिकेसन पठाउने गज्जबको शैलीका बारेमा ,उसले भन्यो – “मुस्कानको भाष मीठो हुन्छ नि त ! “अनि फेरि उहीँ इमोटिकेसनको शैली अर्थात उसकै मुस्कानको भाष ट्यास्स पठाउथ्यो ।
“हुन पनि म असाध्यै सुन्दर थिए । “सबैले त्यसै भन्थे । प्राकृतिक रुपमै सुन्दर थिए म । सरल पनि त्यसै भन्थ्यो ” हजुरलाइ त सुन्दर देखिन मेकअप नै गर्नु नपर्ने रहेछ । ” काला आँखा , सुरिलो नाक , पिपल पाते ओठ , चेरी फल झै राता गाला, गाइको घ्यु झै सेतोपहेलो छालाको रङग, बान्की परेको न होचो न अग्लो कद । एना हेर्दा आफ्नो गुलाफ जस्तो फक्रीएको रुप देखेर भुतुक्कै हुन्थे म आफै पनि
उस्ले मेरो बारेमा राख्ने चासो सामान्य साथिको भन्दा फरक थियो । एकमन त रिस पनि उठ्थ्यो तर खोइ कस्तो रिस हो कुन्नी , मन नपराएको रिस वा प्रेमिल घुर्की लगाएको रिस ! तर मन देखि भने सरल प्रती सहजता पुर्बक आकर्षित हुँदै छु भन्ने सत्यतासङग आफै पनि अनबिज्ञ थिए । बिस्तारै बिस्तारै उसङग कुरा गर्न मन लाग्न थाग्यो । अनलाइन छ कि छैन भनेर दिनमा कयन पटक हेर्ने गर्थे । मेरो मन मस्तिस्कले फेसबुकका भित्ताहरुमा उसलाइ खोज्न थाले मानौ, सरल पानी हो अनि म तिर्खाएको काग जो आकुलव्याकुल हुँदै तृप्तताका खातिर भौतारिदै छ ।
यो सत्य हो , देख्न नसकिने चिजको पनि अस्तित्व हुन्छ जस्तो कि हावा ,बिजुली अनि प्रेम । हावा स्वासप्रस्वास र शितलताका निम्ति प्रयोग गरिन्छ तर अस्तित्वमा देखिदैन । बिजुली यान्त्रिक संचालन र प्रकाशको प्रयोगात्मकतामा देखिन्छ तर अस्तित्वमा देखिदैन । हो , त्यस्तै प्रेमको अस्तित्व पनि देख्न र छुन नसकिने तर महसुस र अनुभव गर्न मात्र सकिने हुदो रहेछ । अक्सिटोसिन र डोपामाइन नामक हर्मोनल परिबर्तनले हुने स्वतस्फूर्त शारीरिक कृया हो प्रेम भन्ने पढेको मैले
प्रेम नामक चिज अस्तित्वमा छ भन्ने कुरालाइ सधै भ्रमका रुपमा लिन्थे।
मैले सधै भ्रम मानेको चिजले किन मलाइ बेस्सरी समाएर आफू तिर तान्दै छ । प्रेम नामक जेलमा कैद गर्न खोग्दै छ , आफ्नो अङ्गालोमा समाहित गराउन खोज्दै छ । रुमानी यादले निथ्रुक्कै भिजाउन खोज्दै छ । म आफैसङग आश्चर्य चकित थिए । दिनहरु बित्दै गए हाम्रो मित्रता झन गाढा हुँदै गयो । सरल उसका दुखका कुरा सुनाउथ्यो । ” आमा छैनन रे उसकी । सौतेनी आमाले माया गरे पनि आमाको झै निस्चल ममता उस्ले कहिल्यै पाएन रे ।” म मायाको लागि तड्पिएको छु । मेरि भावी श्रीमतीबाट आमाको पनि माया पाउ बस ! यहि प्रार्थना छ भगवानसङग ! ” हो , सरल एस्तै भन्थ्यो । उसको हृदयविधारक भनाइले मलाइ भावुक बनाउथ्यो । आखिर नारी हृदय छ मेरो शरीर भित्र कसैको पिडामा नपग्लियोस यो कसरी हुन सक्छ र ? मनको घडा आँसुले भरिएर आखाको बाटो हुदै भुइँमा छताछुल्ल हुन्थ्यो । त्यो बेला लाग्थ्यो , “अहिले नै प्रेमिल अङगालोमा बाधेर प्रेमले चुम्दै भनौ ” म तिमीलाइ प्रेमको कमि कहिल्यै हुन दिने छैन सरल ।” छोटो समयमै हामी दुबै आत्मिय भै सकेका थियौ । उ मसङग खुलेर कुरा गर्थ्यो । तसर्थ : मलाइ पनि उसङग खुल्न अफ्ट्यारो लागेन ।
पारिवारिक पृष्ठभुमि , आर्थिक अवस्था , रहर र चाहना आदिका बारेमा मैले सबै बताए । जीवनको कुनै क्षणमा जसरी पनि अमेरिका गएरै छाड्ने उत्कन्ठालाई पनि मैले ब्यक्त गरेको थिए । मैले नसोधी उसले पनि सबै बृतान्त बतायो । मानौ , म उसकी श्रीमती हु या त हितैसी साथी । उसका कुरा सुन्दा एस्तो लाग्थ्यो , सारै पिडित छ उ । उसको ब्यक्तित्वसङग त प्रभाबित थिए अब बिस्तारै उस्का मुटु छेड्ने कुराहरु सङग पनि प्रभावित हुँदै गए । कामको शिलशिलामा अचानक मलाइ ताप्लेजुङको घुन्सा जानू पर्ने भयो, त्याहा हाम्रो सस्थाले गर्न लागेको कामको सर्वेक्षणका लागि बेलायतबाट आएकी समाजसेवी डा.लिन्डा म अनि अरु दुई जना धुन्साका लागि प्रस्थान गर्यौ । सरललाइ अपर्झट आइ परेको कामका बारेमा केही बताउन पाएको थिइन मैले । धुन्सावाट काठमाडौ फर्के पछि मात्र फेसबुकमा अपडेट भए । यी दिनहरुमा मैले सरललाइ नसम्झिएको पल थिएन ।
बिना खबर अचानक गायब भएकिले म्यासेन्जर भरी सरल शर्माका म्यासेजहरु थिए , प्रेमिल रिस थियो त्याहा, आवेग थियो अनि भर्खरै अङ्कुरित अब्यक्त प्रेमले मेरो अनुपस्थितमा थोरै भए पनि टुसा छोडेको थियो । उस्का म्यासेजहरु पढिसके पछि पुलकित भए । हप्ता भरिको थकान छुमन्तर भयो । तिनै प्रेमिल भावनाका म्यासेजहरुलाइ ह्रुदय भरी छताछुल्ल पोखे अनि आँखा चिम्लिएर सोचे – मनले भन्यो ” सरलको चोखो प्रेममा परि आस्था । ” मस्तिष्कले भन्यो – फेसबुक च्याटको भरमा कुनै निर्णय नगर आस्था , पछुताउनु पर्ला ” । एक मन लाग्यो , मस्तिष्क सहि छ । मैले सम्यम्ता अपनाउनु पर्छ । मनले गरेका मेरा धेरै जसो निर्णयहरु असफल प्रतीत भएका थिए । प्रेम साचो हो कि झुटो हो निष्कर्स निकाल्ने केही मनोबैज्ञानिक शुत्रहरु प्रेममा धोका खाएर डिप्रेसनको सिकार भएको मीत दाइलाइ मनोबिद काहा लिएर जाने क्रममा मैले पनि थाहा पाएको थिए तसर्थ: मैले पनि मनोबिदले गर्ने प्रस्नोत्तरका केहि प्रारम्भिक परिक्षण गरि हेरे तर परिक्षण पूरा गर्न भने मनले पटक्कै मानेन । मन मस्तिस्कलाइ मान्न तयार थिएन अनि मस्तिष्क मनलाई । कुनै चिज एस्ता पनि हुदा रहेछन जस्को अस्तित्व भोगाइमा मात्र हुने रहेछ ।
अन्तत : अगाडि जे हुन्छ समयलाई छोडी दिए । कोहि मानिस एतिकै खास लाग्दा रहेछन न मनको नाता नत रगतको तर पनि प्रीय लाग्दा रहेछन । सरल शर्मा प्रीय मात्रै होइन सर्बप्रीय नै लाग्न थालिसकेको थियो मलाइ । मेरा आखामा अरु पनि सुन्दर पुरुष नभएका भने होइनन । सबैले मलाइ आकर्षित गर्न अनेक प्रपन्च रचिरहन्थे ,मेरो छेउ आउन बाहना खोजी रहन्थे तर म भने उनिहरुसङग सधै बिकर्षित भए । देख्दै नदेखेको सरल शर्मासङ्ग आकर्षित भै सकेकी थिए तनबाट पनि मनबाट पनि । म अति नै ब्यस्त थिए । प्रेम दिवस आएको पनि चाल पाइन । स्माएलको इमोटिकेसन पछि” आइ लभ यु “लेखिएको म्यासेज` ट्याङ ´ आवाजका साथ देखियो । फेसबुक खोलेर हेरे उस्ले त मेरो फोटो नै राखेर प्रेम प्रस्ताब राखेको रहेछ । मेरो फोटो राखेर क्याप्सनमा लेखिएको थियो ” न हावामा देखिन्छ प्रेम न पानीमा न माटोमा देखिन्छ् प्रेम न ढुङ्गामा । प्रेम भोगाइको मिठो अलौकिक अनुभूति हो जस्लाइ महसुस मात्र गर्न सकिन्छ । आज प्रेम दिवसका दिन यहि मिठो अनुभुती मेरी उनिलाइ । के तिमी मेरि दिलकी मात्रै होइन घरकी रानी बन्छेउ आस्था ? ” त्यो देखेर मनमा एक किसिमको मिठो महसुस भयो । छाती भित्र कतै कम्पन बढे जस्तो कस्तो – कस्तो मदहोसीपनले छोप्न थाल्यो । मनले उसलाइ रोजि सकेको भए पनि हतार गर्नु उचित ठानिन । त्यो दिन जवाफ केही पनि लेखिन ।
स्माएलको इमोटिकेसन पछि” आइ लभ यु “लेखिएको म्यासेज` ट्याङ ´ आवाजका साथ देखियो । फेसबुक खोलेर हेरे उस्ले त मेरो फोटो नै राखेर प्रेम प्रस्ताब राखेको रहेछ । मेरो फोटो राखेर क्याप्सनमा लेखिएको थियो ” न हावामा देखिन्छ प्रेम न पानीमा न माटोमा देखिन्छ् प्रेम न ढुङ्गामा ।
त्यो दिन देखि मन एक तमासको भै रहेको थियो अचानक अपरिचित नम्बरबाट कल आयो ” तपाइको पार्सल आएको छ डि.एच.एल को एयरपोर्ट साखामा सम्पर्क राख्नु होला !” कस्ले ? काहावाट ? सोध्न नपाउदै उताबाट फोन ढ्याङग राखेको आवाज आयो । अचम्ममा परे , पार्सल नै पठाउने मान्छे त कोहि थिएन, कस्ले पठायो होला ? एस्तै सोचाइमा डुब्दै डि.एच.एल को अफिस पुगे म । पठाउनेको नाम गोप्य राखिएको रहेछ तब त पार्सलका प्रती झन आश्चर्य थपियो । हतार हतार घर आएर पार्सल खोले । सिटिजन इको ड्राइभ घडी , माइकल कर्सको ब्याग, गुची परफ्युम र ह्वाइट गोल्डको जस्तो देखिने औँठी थियो पार्सलमा । सोच मग्न भएर फेसबुक खोले ” स्माएलको इमोटिकेसन त थियो नै त्यस मुन्तिर लेखिएको थियो ” डार्लिङ , सामान पायौ ? तिमीलाइ मेरो भ्यालेन्टाइन गिफ्ट हो ! मलाइ थाहा छ , तिमी पनि मलाइ माया गर्छ्यौ । प्लिज , डोन्ट टेक इट अदरवाइज । ” अचम्म लाग्यो मेरो एड्रेस काहाबाट पायो उस्ले ? उ अनलाइन नै थियो तुरुन्त सोधे ” मेरो एड्रेस काहाबाट पायौ ? लेख्यो – “जाहा इच्छा त्याहा उपाय प्रीयतमा । “झनक्क रिस पनि उठ्यो । अलिकती थर्काउदै भने ” भन छिटो ? ” टोल नम्बर र घर नम्बर नभए पनि तिम्रो फोन नम्बर त थियो मसङग । नाम , शहर र देश अनि फोन नम्बर छ भने सामान हात लाग्ने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ भन्ने कुरा डि. एच.एलको अफिसमा थाहा पाए । अनि के थियो र प्रीय ।” अचम्म लाग्नु , रिस उठ्नु अनि खुसी हुनु सबै एकै पल्ट भयो मलाइ त्यो बेला ।
सरलको अनौठो प्रेम प्रस्ताब पछि म पनि उसलाइ सोच्न बाध्य भए । ती सामानलाइ राती सुत्ने बेलामा प्रेमले फेरि सुम्सुम्याए , चुमे । मनले भन्यो ” आफ्नो तर्फबाट मन पराएकोसङग बिवाह गर्नु भन्दा केटा तर्फबाट मन पराइनु राम्रो हो ” । धेरै अनुभवीहरु एस्तै भन्थे मलाइ पनि हो झै लाग्यो । झटपट जवाफ लेखे ” म पनि तिम्रो प्रेममा परेकी छु सरल ” अनि दुई ज्यानको बिचमा एउटा मुटु भएको इमोटिकेसन पठाए । खलिल जिब्रानले भनेका छन ” मौरिका लागी फूल जिवनश्रोत हो फूलका लागि मौरी प्रेम दुत हो । “म फूल हु रे अनि उसको जिवनमा जीवनस्रोत भएकी छु रे अनि उ चाहिँ मेरा लागि प्रेमदुत हो रे।” सहि भनेको थियो सरलले साच्चै उ मेरा लागि प्रेमदुत नै थियो । उसैले त हो मेरो जिवनमा प्रेमको सन्देश प्रवाह गरेको । मेरो दिलको संरक्षण गरेको । एसरी हामी बिच झनै सघन र गहन कुराहरु हुन थाले । घन्टौ प्रेमिल बार्तालाप हुन्थे । अङ्गालोमा बेरिएर प्रेममा चुर्लुम्म डुबुल्की मार्न त उ आकाशमा थियो अनि म धर्तिमा तर पनि हामी बिचको दुरी बिज्ञानले छोट्याइ दिएको थियो ।
एकदिन सरलले ” तिम्रा हुने वाला सासुससुरा” भनेर फोटो पठायो । मलाइ औधी खुसी लाग्यो त्यो पल । काममा ब्यस्त त थिए नै म, मेरो प्रेम जीवन पनि सुमधुर चल्दै थियो । सरलका प्रेमिल कुरामा जरा हालेको अब्यक्त प्रेम केवल महसुसमा टुसाउदै थियो । भनिन्छ , ” प्रेमलाइ शारीरिक स्पर्शले अझ बलियो बनाउछ ” हामीमा स्पर्श त थिएन । धेरै टाढा थियौ हामी हाम्रो सामिप्यताबाट । उ अमेरिकि आकाश मुन्तिर थियो अनि म नेपाली आकाश मुन्तिर तर पनि सरलको प्रेमको स्पर्श नै पुस महिनामा झल्याकझुलुक देखिने पारिलो घामको न्यानो चुम्बन जस्तै थियो जाहाबाट म ओझेल पर्न चाहान्न थिए र सक्दिन थिए पनि । हावामा कावा खादै आकाशको सयर गर्न चरा नै हुनु नपर्ने रहेछ । कहिले चलचित्रमा देखिने नायिका हुन्थे म अनि कहिले अप्सरा हुन्थे सरल चाहिँ मेरो पछिपछी हुन्थ्यो ।
“म फूल हु रे अनि उसको जिवनमा जीवनस्रोत भएकी छु रे अनि उ चाहिँ मेरा लागि प्रेमदुत हो रे।” सहि भनेको थियो सरलले साच्चै उ मेरा लागि प्रेमदुत नै थियो ।
मनमौजी कल्पनामा हराउदा समय बितेको पत्तै हुदो रहेनछ । कहिलेकाही त रात पनि कोल्टे नफेरी बित्थ्यो । अझ सरलले ” तिमी त बेलायतकी राजकुमारी डायना जस्तै छ्यौ आस्था । ” भने पछि के चाहियो र मलाइ लाग्थ्यो , सांसारकै सुन्दर र भाग्यमानी म नै हु । एकदिन अपरिचित नम्बरबाट फोन आयो । उठाउ कि नउठाउको दोधार बिचैमा कल मिस्ड कलमा परिणत भयो । फेरि तुरुन्तै आयो अल्छी मान्दै उठाए । फोन सरलको रहेछ उसले भन्यो ” बेबि तिमीलाइ कस्तो छ ? म तिम्रो सरल चिन्यौ ?यो भन्दा अघि हामीले फोनमा कुरा गरेका थिएनौ । च्याटमा लेख्दा जस्तो फोनमा बोल्दा कुरा गहिरा र प्रेमिल हुन सक्दैन थिए । सहज महसुस हुदैन थियो त्यसैले मैले नै च्याटमा मात्रै कुरा गर्ने भनेको थिए । सरलले भन्यो ” बार्बी गर्ल , मैले तिमीलाइ हिराको सेट पठा`को छु । ममिले रोज्नु भ`को थाहा छ के भन्नू हुन्थ्यो ? “मेरि बुहारीलाइ यो सुहाउछ गोरि छिन भनेर । ” उम… , आजकाल त ममिले मलाइ औधी माया गर्न थाल्नु भ`को छ । आम भेरी ह्याप्पी आस्था आम भेरी ह्याप्पी !” मेरो साथि रमेशले फोन गर्यो भने उसले भने बमोजिम गर्नु है । महङ्गो सामान पठाउन त समस्या हुदोर`छ त्याहा तिमीलाइ झिक्न पनि समस्या हुन सक्छ । ल म अफिसमा छु लामो कुरा गर्न मिल्दैन है बार्बी गर्ल । बाइ माइ ललि पप उम्मा….. ।” एउटा लामो चुम्बन दिएर उसले फोन राख्यो । मैले केही सोध्न पाइन वा भनौ दोहोरो कुरै भएन हाम्रो । हिजोआज सामाजिक सन्जालमा ठगिको धन्दा गर्ने गिरोहका बारेमा सुन्दै आएकी त थिए तर सरलका कुरामा आश्चर्य चकित हुने ठाउँ त थियो तर पनि प्रेममा सबै कुरा जायज हुने भनाइलाइ आधार मानेर मेरो मनले उसको चोखो प्रेमलाइ शंका गर्न मानेन ।
प्रेममा परे पछि मान्छेले सबै सहि देख्दो रहेछ । “प्रेम अन्धो हुन्छ” भन्ने आम भनाइ सत्य प्रतीत हुँदै थियो मेरो जीवनमा पनि । सरललाइ आँखा चिम्लेर बिश्वास गर्थे म । सरलले फोन गरेको भोलि पल्ट भारतिय नम्बरबाट फोन आयो । सामान ल्याउने मान्छेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न अब गारो थिएन । हेल्लो ! आस्थाजी हो ? म रमेश सरलको साथी । सरलले मेरो बारेमा कुरा गरेको छु भन्थ्यो । ” मैले भने – हजुर हो ।” “तपाइको सामान धेरै महङ्गो भएकोले भन्सार क्लियर नगरी सामान निकाल्न नसकिने भयो । भन्सार क्लियर गर्न पैसाको आवस्यकता परेको छ आस्थाजी ।” के गरौ मलाइ भेट्नु हुन्छ कि मेरो खातामा पैसा जम्मा गरिदिनु हुन्छ ? ” म अलिक ब्यस्त छु हिजोआज । बरु तपाईं आउनुस न एतै भोलि बिहान खाना खाने गरि हुन्न ? ” आस्थाजी , हुन त हुन्थ्यो तर म पनि ब्यस्त छु बरु एसो गर्नुस न खाता नम्बर दिन्छु त्यसैमा जम्मा गर्दिनुस न हुन्न र ?
” हुन्छ नि त । बरु तपाईं सरलको साथी मलाइ नभेटी फर्कन पाउनु हुन्न नि ।”
“हजुर ।अवस्य पनि । भाउजू नै भनौ होला अब त !” उसले हस त भाउजू ” भनेर फोन राख्यो । म अति ब्यस्त थिए त्यो बेला मलाइ खासै सामानको बारेमा सोच्ने फुर्सद थिएन पनि । सुत्ने बेलामा सरलसङग सधै कुरा हुन्थ्यो मेरो । आज पनि म्यासेन्जरमा उहीँ इमोटिकेसनको शैलीसङग झुल्कियो उ । ” बार्बी गर्ल ! काहा हराएको तिमी ? कति बेर देखि म तिमीलाइ पर्खीरहेको छु । ” मैले भने ” सरल आज थाकेको छु भोली कुरा गर्ने हस ।” मैले बुझेकी थिए, उ कुरा गर्ने मुडमा थियो तर पनी भन्यो -“ओके माइ लभ । आइ लभ यु बेबि सी यु टुमरो ।” हामी दुबै अफ भयौ । मेरि हितैसी साथि तरुणिकालाई भनेको थिए हाम्रो प्रेमप्रसङगका बारेमा ।
उसले भन्थी” केटाहरु केवल केटिको शरीर पाउन प्रेम गर्छन ” तैले सचेत रहनु । हुन पनि उ अनुभवी थिइ यो कुरामा । “जति पुरुषले उसलाइ मन पराए ती सबैले उसको शरिरलाइ पहिलो प्राथमिकतामा राखेको महसुस गरी रे उसले । ” तरुनिकाले सरललाइ हेर्न जिद्धी गर्दा पनि देखाउन सकिन मैले सरलको बिपरित गएर ।” मलाइ देखाउने सहि समय आएको छैन जब आउँछ अनि देखाउनु भनेर बाचा नै गर्न लगाएको थियो उसले मलाइ ।”
” मैले भने ” सरल आज थाकेको छु भोली कुरा गर्ने हस ।” मैले बुझेकी थिए, उ कुरा गर्ने मुडमा थियो तर पनी भन्यो -“ओके माइ लभ । आइ लभ यु बेबि सी यु टुमरो ।” हामी दुबै अफ भयौ ।
थाके र लखतरान भएको शरिरलाई निन्द्रा देबिको ओढनिले पनि ढपक्कै ढाक्न सकेन । अह ! आँखा पटक्कै लागेनन अनि सरललाइ सिधै म्यासेज गरेर फेसबुकमा बोलाए । उ तुरुन्तै देखियो चुम्बनको इमोटिकेसनका साथ अनि लगातार अङ्गालो मारेको , चुम्बनको बर्षा भएको इमोटिकेसन पठायो । मैले पनि जिस्किने मुड बनाए । तरुनिकाले भनेको जस्तो हुन्छन कि हुदैनन त सबै केटाहरु जाच्न मन लाग्यो । लेखे – सरल आज मलाइ तिम्रो सामिप्यता चाहिएको छ । के गरौ म ? तिम्रो स्पर्शको सुखमा आफैलाइ भुल्न चाहान्छु सरल……..एस्तै एस्तै अन्तरङग चाहना लेखे । उसले भन्यो ” आस्था , सम्हालेर राख आफुलाइ अब हामी नजिक हुने दिन धेरै टाढा छैन । म हाम्रो सुहागरातको दिन मात्र सम्पुर्ण रुपले तिम्रो हुने छु अनि तिमी मेरि ।” त्यो पल बिश्वास लाग्यो कि सबै केटाहरु नारी शरीरको भोको हुदैनन । त्यो दिन पछि सरलका निम्ति बाटेको प्रेम र बिश्वासको डोरी अझ बलियो र गर्विलो भयो ।
दिनहरु बिते । हप्ताहरु बिते । हाम्रो माया झनझन प्रगाढ हुँदै गयो । एकदिन उसले मलाइ च्याटमा बोलायो हामी कुरा गर्दै थियौ । कुरा गर्दा गर्दै हाम्रो बार्ता अन्तरङग हुन थल्यो । च्याटमा सरलका मिठासपुर्ण कुराले निथुरुक्कै भिजे म । सरलले गरेको माया र व्यवहारलाई आधार मानेर मैले आफुलाइ मनमनै सम्पुर्ण रुपमा सुम्पेको थिए । तसर्थ : कतै हिचकिचाहट लागेन उसका अघिल्तिर खुल्नलाइ । उसले लेखेका सम्बादलाइ पढ्दा आफुलाइ रोक्न चाहेर पनि रोक्न सकिन । तत्कालका लागि, यथार्थमा नमिठो लाग्ने मीठो भुल गर्दा अलिकती पनि संकोच लागेन मलाइ । आनन्दको अगाडि सबै कुरा फिका लाग्दा रहेछन । म गलत गर्दैछु भन्ने कुराको आभास नभएको भने होइन तर खोइ के भयो मलाइ त्यस बखत नाजवाफ छु म । नसोचेको नचाहेको एकाएक भएको देखेर आफै आश्चर्य चकित थिए । सायद परि-घटना त्यसैलाइ पो भन्छन कि ।
भन्सारबाट सामान उकास्ने पैसा दिएको एक महिना बिति सक्दा पनि सामान पाएको थिएन मैले । बिचमा सरलले एकपल्ट भनेको थियो ” रमेशले लगेको पैसा काम परेर चलाएछ एक हप्ता पछि दिन्छु भनेको छ , के गर्ने नचला पनि भन्न सकिन । भन्सारमा फसेको सामान उफ्फ… कसरी निकाल्ने होला म याहा छु । उफ्फ…. तेत्रो महङ्गो सामान । एकछिन सोचे जसरी भन्यो उम….” बेबि एसो गरन त तिम्रो नाममा पैसा पठाइ दिन्छु म भोलि बरु तिमी नै निकालन त है ।
मैले भने “हुन्छ नि मसङग पैसा छ अहिले बुबाले पठाउनु भएको म त्यसैले सामान निकाल्छु ।” ठिक छ त्यसो भए तिमीलाइ एउटा बैनिले फोन गर्छ उसले ब्ल्याकमा थोरै पैसामा काम गर्दिन्छ तर उसलाइ थोरै कमिसन दिनु पर्छ है । त्यसो भए ठिक छ आस्था । मैले भने बमोजिम गर्नु तिमीलाइ म भोलि या पर्सि पैसा पठाइ दिन्छु नि त ।”
सरलले त्यत्रो महङ्गो सामान पहिल्यै पठाइ सकेको थियो । उसलाइ शंका गर्ने ठाउँ थिएन । तीन लाख भन्दा बढिको सामान लादा भन्सार तिर्नु पर्ने रहेछ भनेर थुप्रै पैसा बुझाइ सकेको थिए मैले । बीस पच्चिस लाखको हिराको सेटका लागि चार पाच लाख खर्च गर्न गारो लागेन मलाइ । कहिले एसका लागि अनि कहिले उसका लागि भनेर चानचुन तीन लाख भन्दा बढी पैसा बुझाइ सकेको थिए मैले । एक दिन दुई दिन गरेर महिनौ दिन बिते । अह , हिराको हार हात परेन न त ती दिन बिचमा सरलको अत्तोपत्तो थियो । उसले दिएको फोन नम्बरमा सम्पर्क गरेकि थिए तर त्यो नम्बरमा फोन कहिल्यै उठेन । मेरो मन त्यसै एक तमासको हुन्थ्यो । मैले सबैथोक सरलमा देख्न थालिसकेकि थिए । म त पानी बिना छटपटिएको माछा झै बन्न पुगे अचानक । काममा ध्यान जान छोड्यो । खान मन लाग्दैन`थ्यो न त राम्रो लाउन । मेरो हबिगत देख्नेहरुका “के भयो र कसो भयो ?” भनेर सोधिने प्रस्नसङग डराउन थाले म ।
आमा बुवा धनकुटामै होलसेल पसलमा ब्यस्त हुनुहुन्थ्यो । म पढ्दै गरेकी अनि आइ.एन.जि.ओ मा काम पनि गर्ने हुनाले आफन्तको नजिकै डेरामा बस्थे । साथिहरु ल्याउन कसैको रोकटोक थिएन । म आफू पनि खुल्ला चरी झै थिए । तलब राम्रै आउने हुनाले आफू बस्ने दुई कोठालाइ चिरिचयाट्टै पारेकी थिए । चाहिने सम्पुर्ण कुराहरु थिए । इनटरनेट पनि थियो । समुद्र पारी बस्ने सरलसङग भेट भएको थियो फेसबुककै माध्यमबाट । माया गाढा पनि फेसबुककै माध्यमबाट भएको थियो । टाढा हुनेलाइ नजिक अनि नजिक हुनेलाइ टाढा बनाइ दिएको छ यो बिज्ञानको चमत्कारले पनि । बिचमा अचानक सरल अलप भयो फेसबुकबाटै । धेरै दिन सम्म मैले देखिन उसलाइ । सरलको मायाले बलियो बनेको उ प्रतिको मेरो बिस्वासको अग्लो धरहरा गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो र भग्नावसेशमा परिणत भयो उसको माया । भाब गहन र सघन भयो भने शब्दहरुले त्यस्को मापन गर्ने क्षमता राख्दा रहेनछन फलस्वरूप हृदयको गहिराइबाट भाबको सघन अभिव्यक्ति नुनिलो पानी बनेर आखाको किनारा हुँदै आशुमा परिणत हुदो रहेछ !
दिनहरु तनाब ग्रस्त बित्दै थिए । आशुले पिडालाइ धुदै थियो । करिब दुइ महिना पछि ” हाय ! बार्बी गर्ल ” भन्दै स्माएल अनि चुम्बनको इमोटिकेसनका साथ झुल्कियो सरल । उसको मायामा तरल बनेकी म ठोस प्राय : भै सकेकी थिए । भावनाहरु मृत प्राय : भै सकेका थिए । टुटिसकेकी थिए म । उसलाइ देख्नासाथ झनक्क रिस उठ्यो । केही लेख्न औलाहरु किबोर्डमा सरेका मात्र के थिए उतैबाट ” सरि बार्बी गर्ल मैले केही इनफर्म गर्न पाइन । अचानक डयाडको दुर्घटनामा मृत्यु भए पछि ममि बिछिप्त भएर ट्रमा´मा जानू भयो डाक्टरको सल्लाहमा म ममिलाइ लिएर स्विजरल्यान्ड ग`को थिए । तिमी तनाबमा हुन्छौ भनेर केही भन्न सकिन । मलाइ माफ गर बार्बी गर्ल ।” मैले केही भन्न सकिन मानौ, मेरो मुखमा टम्म बिर्को लाग्यो । सरलले पनि सोधेन त्यो बेला अनि मैले पनि हिराको सेट हात परेको छैन अझै पनि भन्न सकिन । उ अलप भएको देखेर म नाङगो रुख झै सुक्दै गएकी थिए । प्रेम बिनाको जिन्दगी नाङ्गो रुख जस्तो पो हुने रहेछ त । सरल त मेरा लागि फूल र पात रहेछ बसन्त बनेर मेरो नाङ्गो शरिरलाइ ढाकेको रहेछ । जब उ अचानक हरायो तब देखि म नाङ्गो भएकि थिए । तर आज सरललाई देखेर पुन: नया पालुवाहरु पलाए । ” सरलबाट अलग्गै बस्न नसक्ने भए पछि “अब बिहे गरौ ” भनेर मैले अड्डि लिन थाले । उसले भन्यो – “आमालाइ थोरै सन्चो हुन्छ अनि बिहे गर्ने । ” म पनि तिमीलाइ आजकाल अलिक बढी नै सम्झिन थालेको छु आस्था ।” दुबै ब्यस्त भयौ केहि समय । हाम्रो कुराहरुको फराकिलो आयतन खुम्चिदै आएको थियो । चार दिन भएको थियो कुरा नभएको एकदिन आतिदै फोन गर्यो उसले ” आस्था, मेरो मामाको छोरीलाइ पैसाको खाचो परेछ कति छ तिमीसङग देउ न है । मैले याहाबाट पठाउदा पनि भोलि मात्रै पाउछे उसले । मामाको अचानक अप्रेसन गर्नु पर्ने भएछ । ” सरल एकदमै आतिएको थियो त्यस्तो बेलामा मैले नाइ नास्ती गर्न सकिन । उसैले दिएको नम्बरमा म आफैले फोन गरे । एउटि केटिले फोन उठाइ ।” पैसा लिन आउन भने । ” त्यो केटि तुरुन्त आइ मसङग सतरी हजार थियो त्यो दिए । उ एकदमै हतास देखिन्थी ।” बस” भने मैले उ बस्न मानिन । पैसा लिएर गइ खासै केहो बोलिन पनि ।
” सरि बार्बी गर्ल मैले केही इनफर्म गर्न पाइन । अचानक डयाडको दुर्घटनामा मृत्यु भए पछि ममि बिछिप्त भएर ट्रमा´मा जानू भयो डाक्टरको सल्लाहमा म ममिलाइ लिएर स्विजरल्यान्ड ग`को थिए । तिमी तनाबमा हुन्छौ भनेर केही भन्न सकिन । मलाइ माफ गर बार्बी गर्ल ।” मैले केही भन्न सकिन मानौ, मेरो मुखमा टम्म बिर्को लाग्यो
सरल सङग फेरि दुइतिन दिन कुरा भएन । मनमनै मौन सम्बाद मात्र हुन्थ्यो । मनले मनलाइ सुन्थ्यो । आखाले आखाको भाका बुझ्थ्यो । अब सबैथोक त मिलेको थियो भने दुई शरीर एक हुन मात्र बाकी थियो । बिस्तारै सरल मप्रती नकारात्मक बन्दै गयो । कारण केही थिएन तर सधै निउ खोज्न झगडा गर्न मौका हेरि रहनथ्यो । एक दिन उ साथिको जन्म दिनमा गएको रहेछ त्याहा हार्ड ड्रीङ्क्स गरेको उसलाइ लागि सकेको रहेछ । मसङग कुरा हुदा उसको कुरा गर्ने शैली सधैको जस्तो थिएन । छाडा प्रवृत्तिका सम्बाद हुन थाले । उसले त मलाइ “निलो चलचित्रमा देखिने जस्तो स्व: क्रीडा गर्न लगायो ।” मैले मानिन । फकाए । सम्झाए । बुझाए केही लागेन । अन्तत : उ झोक्कियो तथानाम गाली गर्यो । म यदि उसको छेउमा भएको भए चिथोर्ने, निचोर्ने, कोपर्ने , कुट्ने सबै गर्थ्यो होला । एउटा भोको सिंह झै देखिएको `थ्यो सरल त्यतिबेला मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा । उसको एस्तो भिमकाय रुप देखेर अवाक बने म । मान्छे चिन्नलाइ सङ्गत गर्नु पर्ने रहेछ । मान्छेको मनस्थिती बुझ्नु सारै कठिन कार्य हो भनेर त्यति बेला नै बुझे मैले । म टोलाइ रहे । ल्यापटपको स्क्रिनमा उ अझै पनि मलाइ मनमौजी गाली गर्दै थियो । साङ्केतिक भासामा छाडा प्रवृत्ति देखाउदै थियो । त्यो दिन पछि म सारै दुखी बने । तर पनि सरललाइ गलत मानेन मेरो मनले लाग्यो , सरल बोलेको हैन रक्सी बोलेको हो । केही दिन मैले उसलाइ पाठ पढाउने बिचा गरे । धेरै दिन मैले फेसबुक खोलिन । न त उसले नै कहिल्यै कल गर्यो ।
“आज चाहिँ सरल सङग म आफै कुरा गर्छु, न्यास्रो लागेको छ ।” एस्तै सोच्दै म आफैमा पुलकित हुँदै थिए । अफिसमा खासै काम थिएन पत्रीका पढेर बसे । “सामाजिक सन्जालमा ठगी गर्दै आएका गिरोहको केही सदस्यलाई नेपाल प्रहरिको “केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो”ले समातेको समाचार पढे । मेरो मुटुको गति रोकिएला झै भयो । मनले मानेन सरललाइ त्यस्तो पाप सोच्न सकेन तै पनि हतपत फेसबुक खोले सरल शर्मा त फेसबुकमा कतै देखिदैन । म्यासेन्जरमा गएर हेरे -” यु क्यान नट रिप्लाइ टु दिस पर्सन “भन्ने लेखेको थियो त्याहा । छागाबाट खसेर एकैचोटि चिप्ले ढुङ्गामा पछारिए म । उसले दिएको नम्बरमा फोन गरे
फोन लागेन । आलसतालस भए म । ओठतालु सुक्यो । हावाको बेगझै हुत्तिएर घर गएर सावरमा निकै बेर चिस्याए आफुलाइ अनि हनुमान ढोका तिर लागे । त्याहा त सामाजिक सन्जालबाट ठगिनेको लर्को लागेको रहेछ । कोहि प्रेमिद्वारा गुप्त खिचिएको भिडियोको ब्ल्याकमेलमा परेका रहेछन । कोहि यौन सम्बादको सिकार भएका रहेछन अनि कोहि टपलेस फोटोको ब्ल्याकमेलमा परेका रहेछन । घटनाका सबै प्रकृति हेर्दा हरेक घटनामा प्रेम हाबी भएको थियो । प्रेमिले प्रेमिकालाइ ठगेको थियो । सरल शर्माका अरु धेरै नाम रहेछन । म जस्ता प्रेमिका धेरै रहेछन उसका । उपाहार पठाएर बिहे गर्ने बाचा धेरैलाइ गरेको रहेछ । उनिहरुको त ग्याङ नै रहेछ । हनुमान ढोकाको दृश्य देखेर म उभिएको धर्ती भासिए झै भयो । आफू माथिको आकाशले थिचे जस्तै भयो । निसास्सिए म चारैतिर अन्ध्यारो छायो । शरीर भरी `लोकल एनेस्थेसिया ´लगाए झै भयो । जब ब्युझिए टिचिङ अस्पतालको जनरल वार्डमा थिए म । मेरा छेउमा महिला प्रहरी उभिएकी थिइन । आफू ठगिएको बल्ल त्यो बेला थाहा पाए त्यो पनि प्रेमको नाममा ।
म जस्ता शिक्षित नारी त ठगिए भने सोझासाझा नारीहरु त पाइलै पिच्छे ठगिन्छन होला । अस्पतालले बिरामिलाइ ठग्छ । बिक्रेताले क्रेतालाइ । साथिले साथिलाइ । प्रेमिले प्रेमिकालाइ । हो ! कत्रो भ्रममा फसेकी रहेछु म । हेर्दा हेर्दै आफू हिडेको बाटो भासियो । सहज बाटोमा यात्रारत यात्री म, गन्तव्यमा नपुगी कता मोडिए कता । जाहाबाट फर्कन सक्ने सामर्थ्य देखिन मैले । आफू हिड्ने बाटोको नक्सा आफै कोर्नु पर्छ भन्ने लाग्थ्यो तर उकालो ओरालो र समथर बाटोको नक्सा त समय,परिस्थिति र परिघटनाले कोर्दो रहेछ अनि हामी चाहिँ त्यो बाटोमा यात्रारत यात्री रहेछौ । मलाइ डिस्चार्ज गरियो । केही कानुनी प्रक्रियाका लागि म हनुमान ढोका प्रस्थान गरे ।
खतरनाक दुश्मन- मनु बिद्रोही
यी हातबाट सबै सबै खसिजानेछन् – बिनय सरगम
सँझ्यामा फरक स्वादका कविता